Ukuphila kwePremium nguSølvane Gard: kumbindi weSandane - I-Airbnb
Ukuphila kwePremium nguSølvane Gard: kumbindi weSandane
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguSølvane Gard
USølvane Gard yi-Superhost
"I-Premium Living" nguSølvane Gard zikhethiweyo izindlu, iisuti kunye namagumbi aqeshwayo eGloppen. Kule ndlu yesitudiyo ungaphumla kwindawo yethu yokuphumla ethandekayo yeRococo okanye kwibhedi yethu ekhethekileyo yelizwekazi enemithombo epokothweni. Indawo yokuhlala ifanelekile wena ofuna ukuhlala usembindini nomgama wokuhamba ukuya kwindawo yokutyela, ibha kunye neevenkile.
Le ndlu yi-30m2 kwaye inegumbi lokulala, igumbi lokuhlambela, igumbi lokuhlala elinekhitshi kunye nepaseji. Ikhitshi inikwe zonke izixhobo zasekhitshini eziqhelekileyo, igumbi lokuhlambela lifakwe iithayile ezinkulu zemarble.
Indlu yesitudiyo isandula ukwakhiwa kwaye ibekwe kumgangatho we-3 weKraftbygget kumbindi weSandane. Kukho i-lift kunye ne-stair access. Imbono entle eya eRyssdalshorn kunye nesitrato esikhulu esisembindini.
I-studio ye-studio ine-wifi, ukufudumeza kuyo yonke imigangatho, cofa ikofu yejagi kunye nesithethi seBluetooth. Akukho TV eflethini.
Indawo yokuhlala istudiyo ibekwe kweyona ndawo isembindini weSandane kwaye ingumgama wokuhamba kuyo yonke into: Indawo yokutyela, indawo yokutyela, indawo yokwenza umthambo, imiboniso yenkcubeko, iivenkile ezithengisa ukutya, indawo yokuqubha njl.
Umbuki zindwendwe ngu- Sølvane Gard
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Gloppen